Qiyaasta Warbaahinta Bulshadu waa waajib! | Martech Zone
Cabirka Baraha Bulshada waa waajib!
Saturday, April 18, 2009 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Wax badan ayaa jira dood ku saabsan baraha bulshada (oo ay ku jiraan qorista qoraalka) iyo in natiijooyinka la qiyaasayo iyo in kale iyo sida loo qiyaasayo.
Tusaalooyinka cabbiraadda warbaahinta bulshada qaarkood waxaa ka mid ah wicitaannada wax ka qabashada barta shirkadda, hagaajinta (ama dhimis) qancinta macaamilka, ama macaamilka oo korodhay haynta.
Dadka ka soo horjeeda cabirka baraha bulshada mararka qaar waxay aaminsan yihiin in cabirku yahay waddo halaag, ama ugu yaraan wax is daba marin. Waxay aaminsan yihiin in ganacsiyada ay tahay inay la fuliyaan istiraatiijiyado isgaarsiineed macaamiisha iyo rajada maxaa yeelay waa tan xaq u wax la sameeyo. Waan ku raacsanahay inay tahay waxa saxda ah in la sameeyo… waana inaan cabir warbaahinta bulshada si loo caddeeyo waa wax sax ah in la sameeyo!
Khatarta cabbiraadda, dabcan, waxay ku cabiraysaa si aan ku filnayn ama gunaanad ku saleynaya xog aan dhameystirneyn. Haddii aad garaafto 2 doorsoomayaasha oo aad hesho isku xirnaan, taasi daruuri kama aha inay bixiso caddeyn aan la dafiri karin inay jirto mid. Waxaa jiri kara doorsoomayaal kale oo deegaanka ka xoog badan taas is qodob aad si fudud u maqantahay
Taageerayaasha cabiraya istiraatiijiyadaha suuqgeynta warbaahinta bulshada ayaa inta badan iska fogeeya cunsuriyada aadanaha ee baraha bulshada, waxayna si fudud ugu arkaan inay tahay mid cusub oo lagula tacaalo laguna maareeyo. Aniga ha sameyn ku raac tan. Waxaan rumaysanahay inay tahay mid kale oo dhexdhexaad ah oo si buuxda looga dhex faa'iideysto arsenal qalabkeeda si loogu suuq geeyo wax soo saarkooda kuwa u baahan ama doonaya.
Markii aan aqriyay qoraalkan iska iloow cabirka warbaahinta bulshada Waxaan ka faallooday, asal ahaan, in dooddiisu ay ahayd qodob xasaasi ah. Ganacsiyadu dan kama lihi waxa ra'yigayga ama fikradaada ay ka qabto cabirka baraha bulshada… waxay cabirayaan iyadoon loo eegin.
Cabirka saameynta baraha bulshada waa mid adag, laakiin macquul maahan. Waxaan u maleynayaa in dooda badankeed ay ka timid xaqiiqda ah in cabirka saameynta ay u baahan tahay shaqo adag. Hubinta in booqde kasta lala socdo iyo waxa ficilladoodu ku saabsanaayeen badeecadaada iyo adeeggaaga ma aha hawl fudud… marka waa fekerkeyga in qaar badan oo ka mid ah aqlaaqiyada warbaahinta bulshada aysan fahmin sida, ma fahmin sababta, ama si fudud ayaa caajis badan.
Ma doonayaan inay iswaafajiyaan sicirka saamiyada, qanacsanaanta macaamilka, aragtida guud ee wax soo saarka iyo dabeecada, hogaaminta soo galaya, qiimaha kaqeybgalka, saamiga isku dhow, iyo ilaha aadanaha kharashka adiga kugu baxaya… way fududahay in si fudud looga hadlo inta Jeceshahay ee aad heshay, faallooyinka, ama sheegidda bogagga kale. Nasiib wacan inaad shirkad ku yeelato miisaaniyad suuq geyn ballaaran oo ku saabsan istiraatiijiyad warbaahinta bulshada oo dhameystiran adigoon u sheegin sida loo cabiro guusheeda dollar iyo senti.
Waa inaan cabirnaa. Waa inaan caddeynno. Waa inaan horumarinaa.
Ku dabakhida yoolalka iyo tallaabooyinka Warbaahinta Bulshada macnaheedu maahan inaad u baahan tahay inaad ka tagto dhammaan sifooyinka kale ee saameynta leh ee ganacsiyada adeegsanaya aaladaha bulshada si kor loogu qaado natiijooyinka ganacsiga. Hagaajinta xiriirka macaamiisha iyo rajooyinka, bixinta waddo kaqeybqaadasho, ku dhiirrigelinta maamulka shirkaddaada meesha ay ku taal, helitaanka saamileyaal iyo u oggolaanshaha iyaga inay ku faafiyaan ereyga of dhammaan faa'iidooyinkaas oo dhan maahan in la eryo Waxaad heli kartaa kan ugu fiican labada adduun.
Waxaan ku kalsoonahay dabeecadaha dabiiciga ah ee warbaahinta bulshada si aan u xidido shirkadaha isku dayi doona inay wax ka qabtaan kuwan dhexdhexaadka ah ee cajiibka ah. Cabbiraaddu si fudud uma siin doonto shirkadaha fahamka ku soo noqoshada maalgashiga warbaahinta bulshada, cabbiraaddu waxay sidoo kale siin doontaa shirkadaha caddayn ah in runta iyo daahfurnaanku adkaan doonaan. Awooddu waxay ku jirtaa tirooyinka. Waxaan sidoo kale ku kalsoonahay in tikniyoolajiyadda suuqgeynta ay sii wadi doonto wanaajinta si cabbiraadda qalabkaan cusub ee isgaarsiinta ay u fududaato oo u saxnaato
Hal fikrad kadib, sababtoo ah waxaad cadeynaysaa warbaahinta bulshada inay tahay istiraatiijiyad suuqgeyn macquul ah wali macnaheedu maahan in shirkaduhu ku soo qulqulayaan. Shirkaduhu waa maraakiib adag oo la rogo! Waxaan had iyo jeer la hadalnaa shirkadaha inay qaniinyada xoogaa yar markiiba, caddeeyaan natiijooyinka, ka dibna aan u shaqeyno sidii loo kobcin lahaa barnaamijkooda. Isbeddelku waa adag yahay oo waqti buu qaataa.
Kordhinta Guusha si loo hagaajiyo natiijooyinka
Super Crunchers oo uu qoray Ian Ayres
Apr 18, 2009 at 11: 15 PM
Hadal wanaagsan Waxaan ku riday dhibco badan oo cabiraad ah caafimaad ahaan. Tijaabo. Cabir Tijaabo. Cabir Waqti ka dib dadaalkaaga SM si tartiib tartiib ah ayuu u horumarin doonaa.
Apr 19, 2009 at 6: 15 AM
Waad ku mahadsan tahay sheegista boggeyga, Wareegtada Gudaha ee Suuqgeynta Dijital ah ee boostadaada. Waad ku faraxsan tahay sheegista oo waxaad ka eegi doontaa bartaada .. qormooyin waaweyn oo waaweyn.
Apr 20, 2009 at 9: 24 PM
Waxaa laga yaabaa inaan ku qoray ereyga qaab qaldan. Waad ogtahay inaan qabo arintaas mararka qaarkood. ha. Qodobka dhan ee boostada ayaa ahaa inaan weydiino haddii aan raadineyno NOOCA saxda ah ee cabirka oo aan daruuri aheyn in la iska indho tiro cabirka iyo nafteeda.
Haddii aan cabiri karno wax aan la taaban karin sida sumadeynta iyo naqshadeynta… sidoo kale waa suuragal in annaga aan u cabbirno baraha bulshada oo ah nooc ka mid ah horumarinta sumadda. Waxaan ku raacsanahay in shirkaduhu yihiin markab adag oo la rogrogo. Raadiyuhu wuxuu ahaa nooc suuq geyn sanado badan ah walina way adagtahay in dadka qaar lagu iibiyo qalabka.
Wax shaqo ah kuma laha qadarka shaqada ay ku qaadanayso cabirka aaladda. Waa inaad taas ogaataa hadda. Waxay leedahay wax walba oo ku saabsan qalabka loo adeegsado.
Waxaan dareemayaa inaan dhammaanteen isku dayeyno inaan caddeynno nidaamyada iyo qalabka hadda.
Apr 20, 2009 at 9: 30 PM
Xaqiiqdii waa caqabadda - gaar ahaan maaddaama macaamiisheena ay u arkaan miisaaniyaddooda helitaanka maareyn yar oo bidix iyo midig looga jarayo. Waxaan rajeynayaa maalinta aan ku haysanno xoogaa algorithms ah iyo qalab ka baxsan sanduuqa sanduuqayaga si loo cabbiro saameynta daahfurnaanta iyo furfurnaanta!
Ilaa iyo waqtigaas, aan sii wadno wadaagista natiijooyinkayaga!
Apr 20, 2009 at 11: 28 PM
Su'aalaha waa, dabcan, waxa la cabirayo iyo aaladaha la adeegsado - sidee loo qabtaa kaqaybqaate kasta oo isticmaala. Waa la siiyaa in barnaamijyada falanqaynta webku ay qaban doonaan oo tilmaamayaan taraafikada gudbinta. Kuwa fiican ayaa awood u leh ka dib soo-booqdayaasha la soo gudbiyey ee 'riix-riixa' ee soo socda ee goobta iyo, waxaan rajeynayaa, ka-qaybgalkooda dhacdo guul leh.
Hase yeeshe, in badan oo ka mid ah waxa aan rajeyneyno ayaa awood u siinaya duubista oo ka qaybqaata kordhinta bogga sida muujinta mashiinka raadinta ee backlinks kuma jiraan inta badan barta bulshada ee CMS.
Tusaale ahaan, amarka guud ee robotku waa "tilmaam, raac", haddana, tan laguma cayimin barta Twitter-ka. Haddii aan aragno nambarka aniga oo RT tixraacaya gelitaanka degelkan:
qofku wuxuu arkaa in bots la farayo rel = ”nofollow”. Tani sidoo kale run ayey ku tahay isku xidhka "Macluumaad Dheeraad ah URL" ee Tweeter sidebar.
Mar labaad, mashiinka raadinta ayaa la faray inuusan raacin xiriirka.
Aad u badan backlinks
Apr 22, 2009 at 11: 08 AM
Waan heshiin kari waayey wax intaa ka badan! Qiyaasta ayaa muhiim u ah sameynta warshadeena guul. Dadka intiisa badan ama shirkaduhu wax dhif ah ma qabtaan maxaa yeelay waa "waxa saxda ah in la sameeyo". Badanaa waxaa jira nooc ka mid ah dhiirigelinta oo waxtar noo leh. Cabbiraaddu waxay ansaxineysaa dhiirigelintaas waxayna noo oggolaaneysaa inaan ka faa'iideysano suurtagalnimada laakiin fahamka saameynta.
Apr 27, 2009 at 3: 50 PM
Waad ku mahadsantahay dib ucelinta maqaalkayga ee ku saabsan Cabbirka Warbaahinta Bulshada. Gabi ahaanba waan ku raacsanahay tan! Waxaan layaabay diidmada cabirka baraha bulshada. Si si buuxda loola macaamilo macaamiisha waxaan u maleynayaa inay lagama maarmaan tahay, gaar ahaan haddii shirkad ay rabto inay suuqgeyso wax soo saarkooda dadka doonaya oo u baahan. Qiyaasta ololaha warbaahinta bulshada waa hab fiican oo loola xiriiro macaamiisha isla markaana loo ogaado meelaha iyo kanaalada ay u isticmaalayaan inay kaga hadlaan shirkadda ama wax soo saarka.